नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : लुट्ने, कुट्ने, भुट्ने, छल्ने, हसुर्ने राजनीतिमा बिशेष योग्यता भएका लाजनितिज्ञ जङ्गलीहरुलाई 'एमसीसी ग्रान्ट' को अर्थ के थाहा !
लुट्ने, कुट्ने, भुट्ने, छल्ने, हसुर्ने राजनीतिमा बिशेष योग्यता भएका लाजनितिज्ञ जङ्गलीहरुलाई 'एमसीसी ग्रान्ट' को अर्थ के थाहा !
* अमेरिकाद्वारा नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव
* यसबारे अनावश्यक बहस नगर्न समेत अमेरिकी चेतावनी
लुट्ने, कुट्ने, भुट्ने, छल्ने, हसुर्ने राजनीतिमा बिशेष योग्यता भएका तर यथार्थमा भन्दा लाजनिती गरेर राजनीति गरिरहेको भ्रम छरिरहेका नेपालका सत्ताधारी लाजनितिज्ञ जङ्गलीहरुलाई 'एमसीसी ग्रान्ट' को अर्थ के थाहा ! ५५ अर्ब ग्रान्टले नेपालमा कति काम गर्न सकिन्छ यिनलाई के मतलब ! कमिशन खान पाईन्छ कि पाइन्न ? कमिशन आउने भए कति आउँछ ? यिन लाई त्यो भन्दा बढी चासो छैन । औंठाछाप बाहुल्यता भएको यो लाजनिती र यि लाजनीतिज्ञहरुकै कारण ५५ अर्बबराबर विदेशी मुद्रा आउने 'एमसीसी ग्रान्ट' नलिने भए नलेउ भन्दै अमेरिकाले चेतावनी दिईसक्यो कुन दिन 'एमसीसी ग्रान्ट' रद्द गर्यौं भनेर घोषणा गर्ला भन्ने डर । यि नबुझी नबुझी उफ्रिने भुक्ने हरुलाई देख्दा थुक्न मन लाग्छ । यस्तै गरी गरी नेपाललाई यिनिहरुले बर्बाद पार्ने भए । मुर्ख मनुस्यहरु हो अध्ययन गर, बुझ अनी बिरोध गर । नेपाल र नेपालीको भबिस्य माथि खेलवाड नगर । 'एमसीसी ग्रान्ट' फिर्ता नगर । देशका लागि उपयोग गर । हेर, बुझ 'एमसीसी ग्रान्ट' के हो ? तलका लेखहरुमा यसको बारेमा बयान छ अध्ययन गर ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम बाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित अनलाइन खबरमा प्रकाशित आलेखमा स्वर्णिम वाग्ले भन्छन : "मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अहिले उठेका कुरामा टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ । यसको १८ वर्षको लामो इतिहास छ ।
Top Comment tikaramkandel २०७६ पुष ७ गते १८:३८ 100% Right Kura Sir La Garnu Vo.लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन । तर, बहस बुझेर गरेको राम्रो । यस बहसमा चाहिँ धेरै बाठो बन्न खोज्नेहरूको अल्पज्ञान छचल्किएको मात्र हो See All Add Commentसुशासनलाई बढावा दिने र आयोजनालाई अर्जुन दृष्टि दिनुपर्दछ । सडक र बिजुली बाहेक अन्त लगाउन पाइँदैन । ३०० किलोमिटरको हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन बनाउन ४० करोड डलर र अरु ३०० किलोमिटरको सडक सम्भार, नीतिगत कुराका लागि भनेर हिसाब गरिएको छ । घडीको सुई अन भएपछि रोकिँदैन । त्यसैले अन अगाडि नै सबै तयारी भइरहेको हो । यति ठूलो आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनु पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी हुनेछ भन्ने लाग्छ । मेलम्ची २२ वर्ष भइसक्यो । अर्थात् समयमा आयोजना पूरा हुनु पनि आफैंमा उपलब्धी हो ।
लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन । तर, बहस बुझेर गरेको राम्रो । यस बहसमा चाहिँ धेरै बाठो बन्न खोज्नेहरूको अल्पज्ञान छचल्किएको मात्र हो ।"
पत्रकार नारायण गाउँले लेख्छन : "सम्भवतः एकमुष्ट रूपमा आजसम्मकै ठूलो वैदेशिक अनुदान सहयोगका रूपमा आउन लागेको 'एमसीसी ग्रान्ट' हाम्रो अन्धराष्ट्रवादका कारण तुहिएलाजस्तो देखिन्छ ।
संसदले पास गर्नुपर्ने यो परियोजना पास त होला, तर हाम्रो चर्को राजनीति, घूसखोरी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बीचमैं तुहिन सक्ने डर देखिन्छ । अत्यधिक नकारात्मकता र दुष्प्रचार भयो भने सहयोगदाताले पनि हात झिक़्न सक्छन् नै । राष्ट्रवादको नाममा बम पड्काउन र चन्दा असुल्न एकथरी माओवादी भूमिगत नै छँदै छन् ।
दुईतीन सय त्रिपाल, केही हजार विद्युतीय चुल्हो, केही थान एम्बुलेन्स र केही करोड़का जनलविद्युत् परियोजनाका लागि हात थाप्ने हाम्रो बानीजस्तै बनेको छ । एउटा प्रोजेक्टका लागि ऋण लिने र पाँचवटा प्रोजेक्ट बन्न सक्ने समय र लागत त्यसैमा खर्चिने गरेका छौं । समयमा र तोकिएको लागतमा कुनै पनि आयोजना पूर्ण हुँदैन ।
सरकारको तजबिजीले दिने अनुदान नभएर स्वायत्त संस्थानबाट आउने सहयोग भएकाले दिनेले पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकले तिरेको करबाट जाने सहयोगको रिजल्ट तिनले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समय र परिणामको ठूलो महत्त्व हुन्छ । प्रोजेक्ट समयमैं पूरा गर्नुपर्ने कड़ा शर्तले फाइदा हुने आखिर हामीलाई नै हो । तोकिएको समयमा नयाँ बाटो बन्नु, भएका बाटाहरूको स्तर वृद्धि हुनु र विद्युत निकास हुनसक्ने गरी प्रसारण लाइन बन्नु त हाम्रै फाइदाको कुरो भयो । आखिर यी सबै प्रोजेक्टको स्वामित्व हाम्रै रहने हो । उपयोग गर्ने पनि हामीले नै हो । आज महेन्द्र राजमार्ग कसले बनाइदिएको उसैले प्रयोग गर्ने भन्ने त छैन ।
जालमा फस्ने अनुदानले होइन, ऋणले हो । अनुदान कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्ने शर्त होला तर खर्च भएपछि त्यसमा कुनै शर्त हुँदैन । धेरै भए अर्को अनुदान नआउला । तर ऋण त नतिर्दासम्म विभिन्न शर्तहरूले बाँधिएको हुन्छ । महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामा ऋण लिने र समयमा योजना पूरा गर्न नसक्ने अनि लागत र ब्याज बढ्दै जाने हुँदा जालमा फ़सिने हो । उत्पादनमूलक प्रोजेक्टमा ऋण लिने र समयमैं योजना पूरा गर्ने हो भने पनि जालमा परिन्न । अहिले आउन लागेको त पूरै अनुदान हो । खर्च गर्ने पनि हामीले हाम्रै लागि हो । व्यावसायिक रूपले सफल भएन भने पनि ब्याज र साँवा तिर्न नपर्ने हुनाले यो रिस्कफ्री छ ।
आज पचास अर्बभन्दा बढ़ी अनुदान अमेरिकाबाट आयो भने चीनले त्यसभन्दा बढ़ी अनुदान दिन पनि सक्छ । चीनको पनि वान बेल्ट वान रोडको योजना छ । त्यसमा पनि ऋणभन्दा अनुदान हाम्रा लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । त्यो पनि हामीले यस्तै पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सक्छौं । भारतले त एक खर्ब 'सफ्ट लोन' दिने भनेको थियो, हाम्रो राजनैतिक अस्थिरता र खिंचातानीले त्यो अहिलेसम्म आएको छैन । त्यो पनि बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले लिएर खर्च गर्न सकिन्छ ।
ट्रम्पले चाहँदैमा स्वायत्त रूपमा रहेको एमसिसी बन्द त हुँदैन तर भोलि ट्रम्पजस्तै व्यक्तिहरूको बहुमत सिनेट र कङ्ग्रेसमा भयो भने सरकारको स्वार्थभन्दा बाहिरको यस्तो स्वतन्त्र संस्था खारिज हुन पनि सक्छ । त्यसैले अमेरिकी जनतालाई धन्यवाद भन्दै समयमैं आएको अनुदानलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्नु जरूरी छ ।
हिजो हाम्रा केही नेताहरूले भारतमैं बसेर, त्यहीँ खाएर 'भारतविरुद्ध सुरुङ् युद्ध'को नाममा राष्ट्रियता र भावनाको दुरूपयोग गर्दा देश यति पछि परेको हो । अझै पनि राष्ट्रियतालाई जनता भड़काउने र आफ्नो टिआरपी बढाउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्नेसँग सावधान हुनुपर्छ । संविधान नै संशोधन हुने र राष्ट्रियता नै धरापमा पर्नेसम्मका भ्रम फिजाउनेहरू पनि छन् तर तिनलाई न खास एमसिसिबारे ज्ञान छ, न तिनले यो सम्झौता पढेका छन् ।"
पत्रकार मधुकर अधिकारी सेतोपाटीमा यस बारेमा लेख्छन : "नेपालको समसामयिक राजनीतिमा सत्तारुढ दल भित्र एउटा विषय निकै जोडतोडका साथ उठेको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिकाले पूर्वाधार विकासको लागि प्रदान गरेको ५०० मिलियन डलर अर्थात आजको परिवत्र्य मुद्रामा ५६ अर्व ७९ करोड रुपैयाँको सहयोगको वारेमा संघीय संसदले अनुमोदन गर्नु पर्ने विषयले सत्तारुढ दलका नेताहरु आलोचनात्मक टिप्पणीमा उत्रिएका छन् ।
स्मरणीय छ, केही समय अगाडि घानाको पावर कम्प्याक्ट सम्वन्धि मुख्य प्रावधानहरु पूरा गर्न नसक्दा एमसिसिको वोर्डले उससँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको थियो । नेपालमा पनि राजनीतिक खिचातानीमा परेर केही गरी एमसिसि च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले रद्द गर्ने जस्तो अप्रिय निर्णय गरेको खण्डमा त्यसको जवाफदेहीताको अपजश वर्तमान दुई तिहाईको सरकारको टाउकोमा ईतिहास भरि दर्ज नहोस । अहिलेलाई यत्ति कामना गरौं ।"
अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव दिएको छ। एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि अमेरिकाले यस्तो सुझाव दिएको हो। अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्नसमेत चेतावनी दिएको छ।
नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरूले यसलाई विवादमा तानेपछि अमेरिकी अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन्। यही कारण नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिन पुगेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी किन ठूलो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसद्बाट पारित गराउने हो भने यसका अधिकांश बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी पारित हुने जनाउ अमेरिकालाई दिइसकेका छन्। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पक्षधर नेताले एमसीसीलाई आईपीएसको हिस्साका रूपमा लिँदै आएका छन्। उनीहरू असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध अवलम्बन गरेको नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने पक्षमा छन्। यस्तै नेताहरू भीम रावल र देव गुरुङले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।
सत्तारूढ दलका नेताले एमसीसीका विरोधमा उत्रिएको देख्दा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी आश्चर्यमा परेको दूतावास स्रोतले बतायो। ‘हाम्रो मनसाय नेपाललाई असजिलो पार्ने छैन। जुन ढंगले बहस भएको छ त्यो असहजझैं देखिन्छ’, एक अधिकारीले भने।
नेपालको विकास होस् र यस क्षेत्रका भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरे हामी त्यहीअनुरूप तयार छौं। नेपाल हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक हो।’ अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन्।
अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै भनेका छन्, ‘आईपीएस हाम्रो आफ्नो नीति हो। यसमा अन्य मुलुकको झंै सदस्य बनेर सहकार्य गर्न आवश्यक छैन। अमेरिका छद्म रूपमा नआई खुला रूपमै आएर काम गर्छ।’
परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले विरोधका नाममा विरोध गर्न वा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि केही बुझेका नेताले समेत एमसीसीबारे आपत्ति जनाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको भिडियो हेरेर आईपीएसमा हस्ताक्षर गर्‍यो भनेर कराउने नेता देख्दा दिक्क लागेको छ’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘हामी कस्तो कमजोर नेताको कजाइँमा रहेछौं ? अध्ययन र सोचाइ खोइ ? ’
पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले पनि अध्ययन गरेका भन्दा पार्टी संगठन पढेर आएका नेताका कारण समस्या देखिएको बताए। उनले बुझेका नेताले पनि सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको भन्दै यसमा जनता चनाखो हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आईपीएस र एमसीसी फरक हुन्। एमसीसी सुरु हुँदा आईपीएसको कुरै थिएन। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग सम्बन्धमा केन्द्रित छ।’
एमसीसी अमेरिकाबाट नेपालमा आउन लागेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय सहयोग हो। २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त सहयोग सम्झौतामा वासिङ्टन डीसीमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसमा अमेरिकाको ५६ अर्ब र नेपालको १३ अर्बको लगानी छ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत एमसीसीलाई अनेकन् बार्गेनिङको विषय बनाउँदा शक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रने विषय किन चासोमा रहेन ? छिमेकीले पनि शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहेको देखिँदैन। तर हामी बुज्रुक भएर अघि बढेका छौं’, डा.महतले भने। उनका अनुसार एकै पटक पचास अर्बभन्दा बढी सहयोग अनुदान आउनु चानचुने विषय होइन।
एमसीसी विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरण गर्न अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई दिने सहायताका रूपमा सन् २००४ मा स्थापित सहायता संयन्त्र हो। यो सहायता अमेरिकाको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले पारित गरेपछि मात्र सम्बन्धित मुलुकमा पुग्नेछ। यसैले सहयोग लिने मुलुकले पनि संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अमेरिकाले ४४ मुलुकमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग गरिरहेको छ।
‘नेपालले कम्बोडिया, भेनेजुयला, उत्तर कोरिया वा त्यो स्तरको मुलुकका विषयमा वैचारिक सहकार्य गर्ने र सत्तामा जाने जोडघटाउका लागि विश्व शक्ति मुलुकलाई खेलाँची गरेर चिढ्याउनु राम्रो होइन’, पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘हामीले कोसँग निहुँ खोजेका छौं त्यो ध्यान दिनुपर्छ।’
छिमेकी चीनले अघि बढाएको बीआरआई रणनीतिमा सदस्य नै बनेर खुला बहस गर्ने अनि एमसीसीको विरोध गर्नुमा राजनीतिक उद्देश्य झल्किएको उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘एमसीसी र बीआरआईका आआफ्नै लक्ष्य होलान्। तर, हामीले नेपाललाई फाइदा हुने सहयोग लिन चुक्नु हुन्न।’
एमसीसीलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने तयारी सरकारले गरेको छ। एमसीसी हिउँदे अधिवेशनमा पारित नभए अमेरिकाले समय नथप्ने भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एमसीसीलाई रोक्न नहुने बताए। उनले भने, ‘प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नति आफंैमा अर्थपूर्ण काम हो। यसलाई रोक्न हुँदैन।’ एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाअन्तर्गत राखेर अघि बढाउने नीति सरकारको छ।
‘आईपीएस होइन एमसीसी’
परराष्ट्रमन्‍त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी राष्ट्रिय हितका पक्षमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको बैठकमा बुधबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीलाई गलत तरिकाले नबुझ्न अनुरोध गरे। ‘यो सम्झौता कोसँग गरिरहेका छौं भन्‍नेतिर नजाऊँ, हामीले कस्तो परिस्थितिमा गरिरहेका छौं भन्नेतिर जाऊँ’, उनले भने, ‘विकासका लागि एमसीसी महŒवपूर्ण छ।’
इन्डोप्यासेफिक नीति (आईपीएस) सँग एमसीसीलाई नहेर्नसमेत उनले अनुरोध गरे। ‘यसलाई इन्डोप्यासिफिकसँग जोड्न हुँदैन, सैन्य गठबन्धनसँग पनि यसको सम्बन्ध छैन’, उनले भने, ‘हामीले अध्ययन गरेर ऊर्जा तथा सडकमा लगानी गर्दा उचित हुने भएपछि एमसीसीको सम्झौता गरिएको हो।’